Nick Lee wetara gam akporo na iPhone nwere ikpe a pụrụ iche | Gam akporosis
Anyị mechara nwee gam akporo na iPhone
Agha dị n'etiti SOs ma ọ bụ ụdị abụọ a emesịa njedebe. Nke a bụ ihe Nick Lee n'onwe ya na-ekwu, modder onye n'April gosipụtara etu esi eji Windows 95 na Apple Watch, ma ugbu a, anyị Juputa ihe ijuanya ozo na-agwakọta mmadụ abụọ na-anọgide na-alụ ọgụ na a ọgụ yiri yiri n'akwụsịghị akwụsị na oge.
Ma ọ bụ na Lee enwewo ike ime ihe a na-anụbeghị, nwere gam akporo na iPhone. Isi ihe iji nweta ihe a bụ ikpe na-ezobe bọọdụ na-arụ ọrụ na gam akporo na nke ejikọtara na ihuenyo nke iPhone. Ihe nwere ike iyi ihe dị mfe ịme, adịghị mfe ebe ọ bụ na usoro ahụ gụnyere ịtụle ụfọdụ n'ihe metụtara sọftụwia na ngwaike.
Na nke software, Lee gbanwere AOSP (Android Open Source Project), isi mmalite koodu maka nsụgharị niile nke Android, ịgụnye usoro na mmemme iji kpọtụrụ iPhone site na USB, nyefee ọdịnaya nke ihuenyo gam akporo wee sụgharịa ihe mmetụ ahụ site na iPhone gaa gam akporo.
N'ihe banyere ngwaike, Lee gha acho otu (SBC) nke pere mpe iji kwado ihe omuma ama di omimi iji nye ezigbo ihe omuma gam akporo. Ka anyị gharakwa ikwu maka itinye ihe niile ọnụ ka e wee nwee ike jikọta ma wepụ ya oge niile, nke metụtara gaa na 3D ebi maka nkọwa ikpeazụ ndị ahụ.
N'ikpeazụ Lee nwere a ọma emezuchala hacking ọrụ na n'agbanyeghị Ezughi oke, ikpe okpukpu atọ ọkpụrụkpụ nke iPhone na enweghi arụmọrụ, dapụtara na mbụ gam akporo mobile na iPhone.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Anyị mechara nwee gam akporo na iPhone
Kedu ihe m chọrọ nke ahụ? Dị ka amara dị mma, mana ya ta ...
Zaghachi Alberto Martínez
Ọ bụrụ na nke ahụ bụ kpomkwem ihe na-eme na ukara Apple ikpe na ụma batrị hahaha?
Mana ezughi oke na nzuzu dị na gam akporo na ha chọkwara itinye ya na iPhone
The Windows 10 interface na gam akporo ekele maka ihe a na-akpali akpali free Launcher maka gam akporo
Oku olu bụ ihe ọhụrụ na Slack